Alzeria : Ny diaben’ny Kabyle ho an’ny fizakantena · Global Voices teny Malagasy
Alzeria : Ny diaben'ny Kabyle ho an'ny fizakantena
Voadika ny 24 Jona 2018 4:50 GMT
Vakio amin'ny teny Français, 繁體中文, 简体中文, বাংলা, Español, English
(Lahatsoratra teny frantsay efa tamin'ny Janoary 2010)
Nanao diabe tao amin'ny faritra avaratry ny firenena, Kabylie, ny Kabyle, mponina voalohany any Alzeria ny Talata 12 Janoary, alohan'ny fankalazana ny taona vaovao Berbère (Yennayer), mba hitaky fizakantena bebe kokoa avy amin'ny fanjakana foibe. Nilaza ny Hetsika ho an'ny fizakantena ao Kabylie (MAK), mpikarakara ny hetsika fa niatrika ny tanana mavesatry ny manampahefana izay nametraka sivana tamin'ny fampahalalahambaovao ny zavatra natomboka ho diabe am-pilaminana. Satria nitodika tao Haiti sy ny loza vokatry ny horohoron-tany mahatsiravina ny mason’ izao tontolo izao, vitsy ny vaovao momba ny hetsika mipoitra amin'ny fampahalalam-baovao mahazatra, ka nahatonga ny mpanao fihetsiketsehana sy ny mpanohana azy hitatitra izany ao amin'ny aterineto.
Manana tantara lavabe momba ny fifandonana tamin'ny governemanta Alzeriana i Kabylie, satria nahitana fitakiana fahaleovantena tanteraka miala amin'ny fanjakana foibe ka mankany amin'ny tolo-kevitra vao haingana momba ny drafitra fizakantena ny fitakian'ireo tompotany, tantara nitambatra tamin'ny taona 2001 tamin'ilay antsoina hoe lohataona mainty rehefa nipoaka nanerana ny faritra ny korontana ary nitarika fifandonana nahafatesana olona teo amin'ny mpanao fihetsiketsehana sy ny tafika Alzeriana..
Namoaka ity lahatsary ity tao amin'ny Youtube ity i Tilanum , izay mampiseho ny fifanjevoana feno herisetra teo amin'ireo mpanao fihetsiketsehana miventy hoe “Fahefana mpamono olona” sy ny mpitandro ny filaminana:
Narahan'ireo mikrôbilaogera tahaka an'i Kabyle ny hetsika, izay nisioka ny diabe ary nandefa rohy mankany amin'ny sarin'ny hetsika:
Saiduali, izay mibilaogy ao amin'ny Portal of Free Men (Vavahadin-tseraseran'ny Olona Afaka) nandefa sary momba ny diabe natao tao amin'ny tanàna amoron-dranomasina ao Bejaia:
Nantsangana tao amin'ny tranokala tambajotra sosialy Facebook ny vondrona iray, izay nahasarika mpikambana 800 ary nanambatra ireo mpanohana sy ny mpanohitra ny fahaleovantena ao Kabylie. Maneho hevitra ao amin'ny Rindrin'ny Vondrona i Lee Loo, manazava fa na dia Berbera aza izy dia manohitra ny fizakantena. Manoratra izy hoe:
Mampahamenatra anay ianareo. Amazigh aho fa Alzeria hatrany ny tanindrazako […] Tsy manam-bintana amin'ny fahazoana izany ianare o[…] Manohitra izany ny sisa amin'ny Kabyle!
Manohitra ity fanambarana ity i Allas Di Tlelli, mibilaogy ao amin'ny Kabyles.net. Hoy izy nanoratra:
Manohana ny fizakantenan'i Kabylie ny hery misy ao Kabylie, miaraka amin'ny fomba samihafa izay avy amin'ny foto-kevitra ara-politika kokoa.
Ao anatin'ny fepetra vao haingana noraisin'i Maraoka mpifanolo-bodirindrina ireo hetsika ireo mba hanomezana zo bebe kokoa ho an'ny mponina Amazigh (ampianarina any an-tsekoly ny fiteny tompotany ary natsangana vao haingana ny fantsom-pahitalavitra amin'ny teny Berbera), fanampin'izany ny fandaharana midadasika kokoa izay hitondra fizakantena bebe kokoa ho an'ny faritra samihafa, anisan'izany ny sisintany ifandirana ao Sahara Andrefana, araka ny filazan'ny ny manampahefana Maraokana.
Ity lahatsoratra ity dia anisan'ny fitantarana manokana momba ny Zon'ny Tompotany.
Tantaran'ny Alzeria farany
08 Mey 2021Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana